लकडाउनको अवधि बैशाख २५ सम्म लम्व्याइयो - 761खबर.com
लकडाउनको अवधि बैशाख २५ सम्म लम्व्याइयो
वैशाख १५,काठमाडौं - नेपाल सरकारले कोरोनाभाइरसको जोखिम नेपालमा अझैं रहेको भन्दै लक डाउन (बन्दाबन्दी)लाई वैशाख २५ गते सम्म लम्ब्याएको छ । १४ गते आईतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो । सो जानकारी सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले दिनुभएको हो । साथै बैठकले इपीएस अन्तगर्त कोरीया जाने कामदारलाई दुबै देशका सरकारबीचको समझदारीमा जान दिन निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो । साथै हवाइ उडान तथा अवतरण भने बैशाखको अन्तमसम्म रोक्ने निर्णय भएको छ । चैत ११ गतेदेखि शुरु भएको लक डाउन यस अघि तीनपटक थपगरि सकेको छ । चैत ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्धारण गरिएको लक डाउन चैत १६ गते सरकारले पुनः दोश्रो पटकबढाएर २५ गतेसम्म पु¥याएको थियो । यो अवधिमा पनि संक्रमितको संख्या नेपालमा बढेकाले वैशाख ३ गतेसम्मको लागि तेश्रो पटक लक डाउनको अवधिबढाइएको थियो । छिमेकी देश भारतमा लक डाउनको समय बढाएको र त्यहाँकोरोना भाइरसका कारणले संक्रमणबढेसँगै नेपालमापनिबढ्न सक्ने आंकलनगर्दैै डाउनको अवधि चौंथो पटकमा १२ दिनबढाएर वैशाख १५ सम्म पु¥याएको हो । आइतबार नेपालमा थप तीन जनालाई संक्रमणभएर संक्रमित संख्या ५२ जनापुगेको छ भने १६ जनापूर्ण रुपमानिको भएर डिस्चार्ज भएकाछन् । संक्रमितअन्य ३६ जना देशकाविभिन्नअस्पतालमाउपचार गराइरहनुभएको छ । गोरखापत्रअनलाइनका अनुसार,उहाँहरु सबैको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवत्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी गराउनुभएको छ ।